Wararka Maanta: Sabti, Mar 17, 2012-Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif oo Tababar u soo xiray Saraakiil Ciidan Qaarkoodna dallacsiiyay
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif oo Tababar u soo xiray Saraakiil Ciidan Qaarkoodna dallacsiiyay Sabti, Maarso 17, 2012 (HOL) — Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta tababar ugu soo xiray boqolaal isugu jiray askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda KMG ah xero ku taalla deegaanka Jasiira ee duleedka Muqdisho.
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Jen. C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan) iyo saraakiil kale ayaa madaxweynaha kala qaybgalay munaasabadda lagu soo xirayay tababarka iyagoo halkaas ka jeediyay hadallo guubaabo ahaa.
Ciidamada tababarka loosoo xiray ayay tiradoodu ahayd 600-askari wuxuuna tababar u socday muddo hal sano, iyadoo ciidamadu ay soo bandhigeen gaaddo-ka-ciyaar ay ku muujinayeen tababarkii ay qaateen.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda xirtaanka ayaa sheegay in dal walba ay ciidamadu muhiimad gaar ah u leeyihiin, ayna yihiin kuwa difaacaya xorriyada iyo madaxbannaanida dalka, isagoo ugu baaqay ciidamada inay xoojiyaan howlaha ay dalka iyo dadka u hayaan.
"Cunnoqabteynta hubka ee saaran Soomaaliya waxay qabad ku tagay dhismaha ciidamada iyo la horumariyo, waxaan codsanaynaa mar kale in nalaga qaado si aan u horumarinno ciidankeenna meel walba oo ay joogaan," ayuu Sheekh Shariif ka sheegay munaasabadda.
Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu dallacsiin iyo abaalmarinnana guddoonsiiyay qaar ka mid ah ciidamadii tababarka loosoo xiray oo la sheegay inay muujiyay intii tababarku socday dadaal dheeraad ah iyo asluub-wa, wuxuuna xusay in dowladdu ay u soo jeesatay dhismaha ciidamada qalabka sida si ay awood ugu hesho in dalka oo dhan lagu soo celiyo ammaan.
Ugu dambeyn, madaxweynuhu wuxuu kula dardaarmay ciidamadii tababar loosoo xiray inay isku diyaariyaan difaaca sharafta iyo madaxbannaanida dalka, taasoo uu sheegay inay tahay midda loo tababaray.
Sabti, Maarso 17, 2012 (HOL)- Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha Wakiiladda, ayaa loolan adag ugu jira buuxinta labadda jaggo ee ka banaan shirguddoonka golaha Wakiiladda Somaliland. Abuu Mansuur Al-Ameerika oo Video uu soo duubay ku sheegay in uu cabsi ka qabo in ay dilaan Al-Shabaab 3/17/2012 8:23 AM EST
Sabti, Maarso 17, 2012 — Omar Shafik Hammami oo loo yaqaano Abuu Mansuur Al-Ameerika, isla markaana ka dhinac dagaallamayay Xarrakadda Al-Shabaab muddo sanado ah ayaa markii ugu horreysay soo saaray muuqaal Video ah oo uu ku sheegayo in ay nafsaddiisa khatar ku jirto. Guddoonka Golaha Wakiiladda Somaliland oo si-casilay iyo golaha Wakiiladda oo ka Aqballay Iscsilaadda 3/17/2012 7:55 AM EST